बिक्री मूल्य सस्तो औद्योगिकको लागि स्पीड रिड्यूसर गियरबक्स गियरहेड्स
बिक्री मूल्य सस्तो औद्योगिकको लागि स्पीड रिड्यूसर गियरबक्स
हामी उत्तम मूल्यमा उच्च सटीक गति रिड्यूसर गियरबक्स प्रस्ताव गर्दछौं।
उच्च-गुणवत्ताको रिडुसर गियरबक्स
त्यहाँ गियरबक्स र गति कमकर्ताहरूको एक ठूलो चयन छन् अनुप्रयोगको विस्तृत प्रकारका लागि जो उच्च टोक़ र ढिलो गति चाहिन्छ। हाम्रो सबै ट्रान्समिशन स्पीड रिड्यूसर्ससँग उत्कृष्ट गुणस्तर र शक्ति छ। औद्योगिक गियरबक्स र स्पीड रिड्यूसरहरूमा उत्तम सौदा प्राप्त गर्नुहोस्।
हाम्रो सबै उत्पादनहरू
Speed ​​Reducer Gearbox को बारेमा के हुन्छ?
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ड्राइभमा उपलब्ध गँड्यौला गियर कम गर्नेहरू कमदेखि मध्यम हार्सपावर अनुप्रयोगहरूमा वेग कम गर्न र टार्क बढाउन प्रयोग गरिन्छ। साथै दायाँ कोण, समानान्तर र संयोजन आउटपुटमा पनि उपलब्ध छ। ट्रिपल-कटौती गँड्यौला गियर गति कम गर्नेहरू अनुपातमा 5000०००: १ देखि १1००००: १ र केन्द्र दूरी ”" बाट २० "मा उपलब्ध छन्। प्लायटरी गियर कम गर्नेहरूले गियरहरू केन्द्रीय स्थित, बाह्य दाँतमा राखिएको गियरसँग मिलाएको छ जुन एकसँग मेस गर्दछ। वा अधिक ग्रह गियरहरू। हाम्रो दाहिने कोण गियरमोटरहरू र कमकर्ताहरूले राज्य को अत्याधुनिक कुशल गियरिंग सुविधा। इनलाइन गियर रिडक्सन बक्स, लिbel्कबेल्ट गियर कमकर्ताहरू, बालडोर डज स्पीड कम गर्ने र विभिन्न आयाममा अधिक पाउनुहोस्।
स्पीड रिड्यूसर गियरबक्सको प्रयोग के उद्देश्य हो?
एक उच्च गति गियर रिडुसरको तुलनामा, स्पीड रिड्यूसर गियरबक्स मोटर वा केही ड्राइभहरूबाट इनपुटको गति घटाउन प्रयोग गरिन्छ, जबकि टोक़लाई इनपुट मानहरू पनि स्पीड रिड्यूसर आउटपुट शाफ्ट वा संचालित संयन्त्रमा गुणा गर्छौं भने हामी विभिन्न प्रकारका उत्पादन गर्छौं। गति कम गर्नेहरूको, टोक़ बढाउन र तपाईंको इलेक्ट्रिक मोटर्सको लोड गति कम गर्न डिजाइन गरिएको। यो उच्च गुणवत्ता, कम मूल्य उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ। एक स्पीड रिड्यूसर डिजाईन गर्दा, कुनै फरक पर्दैन। अर्को शब्दमा, एक गियर रिडुसरले टोकलाई बढाउँदछ र मोटरको गति कम गर्दछ। खाली खाली शाफ्ट रिड्यूसरले एक केन्द्र थ्रु होल प्रदान गर्दछ प्रणाली डिजाइन लचिलोपन र अन्तरिक्ष बचत विकल्पहरूको लागि कम्पोनेन्ट प्रकार विन्यासको साथ। चीनको अग्रणी ब्रान्डहरूबाट products 45 उत्पादनहरू बीच सजीलै तपाईंको इलेक्ट्रिक मोटर गियर रिडुसर खोज्नुहोस्।
स्पिड रिड्यूसर गियरबक्सको लागि केहि सन्दर्भ।
केहि अधिक पावर ट्रांसमिशन उत्पादनहरूको लागि सन्दर्भ
यदि तपाईं स्पीड रिड्यूसर गियरबक्समा उत्तम सम्झौताहरू फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने
हामी यहाँ तपाईंको लागि पर्खिरहेका छौं।
हाम्रो मोटर पेच प्रकार र कीरा प्रकार उत्पादन गर्दछ गियर रिडुसर (गियरबक्सहरू) गियरमोटरका लागि। हामी तयार छौं र हाम्रो सहयोगको लागि तत्पर छौं। हामी लाभको रूपमा गुणवत्ता र ईमानदारीको रूपमा सबैभन्दा कम मूल्य लिन्छौं।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र यहाँ हाम्रो सम्पर्कहरू छन्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो जवाफ दिनेछौं!
E-mail: [ईमेल सुरक्षित] स्काईप आईडी: क्विंगडाओ 411११